Ozi Forex | Mmezi ego site na ahịa ego na FXCC
Home / Banyere / Banyere FXCC / Company News
Akụkọ Ụlọ Ọrụ na Mgbasa Ozi
FXCC nwere obi ụtọ ịkpọsa n'ihu n'ihu mgbasa ozi Nkwado anyị
N'ihi nnukwu mmasị na mgbasa ozi nkwado anyị, FXCC na-enwe obi ụtọ ịkọrọ ndị ahịa anyị na ndị mmekọ na onyinye a na-enye Bonus ga-aga n'ihu na October.
Nkwalite ego a na-eme ka ị nweta ụgwọ ọrụ maka ndị ahịa ọhụrụ anyị yana ndị ahịa anyị na-eguzosi ike n'ihe site na ijikọta 100% Start-Up bonus na 50% Ego ego maka ego ọ bụla emere n'ime ọnwa! Nke a abụghịkwa - maka ahia ọ bụla ndị ahịa anyị na-akwụ ụgwọ, ebe anyị na-akwụghachi ndị ahịa anyị na-eguzosi ike n'ihe ụgwọ ego.
Ị dị njikere iji uru nke nkwado a? pịa ebe a ịmalite ma ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ ma.
Ndị ahịa ndị nwere akaụntụ na FXCC ma chọọ sonye na nkwalite Nabatara oge ọ bụla iji kwuo ego ahụ!
* Biko zoo aka na Usoro na Ọnọdụ maka nkọwa nke nkwalite bonus.
FXCC ẹkedori ọhụrụ saịtị iji nweta ndị na-abụghị EU ahịa
Dịka akụkụ nke ọkwọ ụgbọala anyị na-aga n'ihu iji mụbaa mba anyị na-eru ma gbasaa ozi anyị nye ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ, FXCC emeghewo ebe nrụọrụ weebụ ọhụụ ọhụrụ nke ga-eme ka ndị ahịa anyị na-abụghị ndị EU, ma ọ bụ ndị ahịa Europe ghara ịzụ ahịa na EU. na-enye ohere dị mfe na ngwaahịa na ọrụ anyị, ebe anyị na-echekwa ebe ahịa nchebe maka ndị ahịa anyị.
N'iburu n'uche ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke ndị ahịa na-abanye na ahịa ahịa, anyị ejiriwo ọrụ iji mee ka ọnọdụ ọnọdụ ahịa dị mma, na-enye ngwá ahịa na ngwaahịa dị iche iche, ebe ọ na-ekwusi ike na eziokwu na oge niile.
N'ịbụ onye otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma na ndị a tụkwasịrị obi na ụlọ ọrụ ahụ, ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ime ka ndị ahịa anyị nwee ike ịbanye n'ahịa ahịa mgbe ị na-ere ahịa na onye ahia ahia.
Ulo oru ahia nke China Union maka ndi ahia ahia
Anyị na-emepụta n'oge na-adịbeghị anya ego ịkwụ ụgwọ na ego akaụntụ site na mkpakọrịta anyị na China Union Pay. N'ịmepụta mmekọrịta ọhụrụ a, anyị na-emeghe ọnụ ụzọ ámá, na-enye ndị ahịa FX ọhụrụ na ahụmahụ ndị si mba Asia dị ka China, ịzụ ahịa site na FXCC si nlereanya nke ahịa ECN FX.
E guzobela China UnionPay na 2002, ụlọ ọrụ ahụ amalitelarị ọganihu n'ime afọ iri na ise. China Union Pay payer third as a payer service, na ntụgharị nke azụmahịa kwa ụbọchị azụmahịa kwadoro, n'azụ MasterCard na Visa. N'ihi nkwado ya site n'aka gọọmentị Gọọmenti China bụ CUP ghọrọ onye ọrụ nkwụnye ego kachasị mma maka ụlọ isi ụlọ anọ dị na China.
Dịka onye mara ọkwa mara ma na-ezo aka na "Union Pay" ma ọ bụ "CUP", onye na-ahụ maka ọrụ enyelarị kaadị ijeri ise zuru ụwa ọnụ. China Union Pay bụ ugbu a usoro nkwụnye ụgwọ nke a na-enweta karịa mba 150 na ebe ọ bụ na ndị na-akwụ ụgwọ na 2009 Union nwere ike ịnweta ndị ọrụ Link na UK ma jiri kaadị ha maka ịbịaru ọsọ na Europe.
China Union Na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa ka a na-akwụ ụgwọ maka ụlọ ndị a họọrọ nabatara maka ndị bi na China ka ha nweta ahịa azụmahịa. Ụlọ ọrụ China Union Paystal aghọwo ebe dị mkpa na akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ ụlọ akụ nke China. Ha emeela ihe dị mkpa na mmepe dum nke ụlọ ọrụ kaadị na China.
Na FXCC anyị na-agbasi mbọ ike iji meziwanye ihe n'akụkụ niile nke onye ahịa anyị na-elekwasị anya azụmaahịa. Dị ka nke a, anyị na-enyocha ụlọ ọrụ ego maka ụzọ nkwụnye ego ọhụrụ, iji nyere ndị ahịa anyị aka ịkwụsị akaụntụ ha n'ụzọ dị mfe, ma ọ bụ mepee akụkọ ọhụrụ, iji zụọ FX site na njedebe MetaTrader anyị.